🥇 ▷ Ku ciyaarista masraxa 'MediEvil remake' ee PS4 wuxuu cadeeyay inay ilaalineyso wanaagga oo dhan iyo qeybtii xumaa ee 1998-kii qarnigii hore. ✅
Ku ciyaarista masraxa ‘MediEvil remake’ ee PS4 wuxuu cadeeyay inay ilaalineyso wanaagga oo dhan iyo qeybtii xumaa ee 1998-kii qarnigii hore.
MediEvil Waa cayaaraha noocaas ah oo kalgacal gaar ah loo badbaadiyo inkastoo uusan qumman. Mid ka mid ah Classics badan oo ka mid ah PlayStation-ka ugu horreeyay ee wakhtigaas ayaa loo soocay in loo kala qaybiyo sidii ciyaar cibaado, inkasta oo ay leeyihiin dhinacyo aan laga maarmin. Marka laga hadlayo shaqadan ee kaamilkii Guumrilla ee la la ‘yahay, inta badan kamarad fiiqan iyo kontorool nasiib darro ah.
Haddii farqi u dhexeeyey buuggyaraha ‘Sony console’ ee 1998 waxay ahayd, qayb ahaan, taas dareen weyn oo kaftan ah, sida markaad u isticmaaleysid Sir Daniel Fortesque cududda qalfoofka gaarka ah (macno ahaan) sidii hub. Isugeyntiisii ​​ma uusan sugin, laba sano kadib, ilaa asalka uu ku raaxaystay cusbooneysiin cusub oo ku saabsan PSP oo hoos timaada naaneysyada Qiyaame. Iyo bisha Oktoobar, sida aan ognahay, waxay noqon doontaa marki PS4 la a hagaajin Oo leh muuqaal wanaagsan.
Sir Daniel Fortesque, “geesiga” gaarka ah
Ka faa’iideysiga xaqiiqda ah in muuqaalkiisa la heli karo ilaa xalay, munaasabadda Gobolka Ciyaaraha ee dhowaan, ma aanan dooneynin inaan lumiyo fursadii aan ku hubin lahaa isbedelka gacanta iyo isbeddelada. hagaajin loogu talagalay PS4 beddelashada, gudbinta, hore PlayStation, oo aan wali ku haysto sanduuqa iyo buugga.
Waxa ugu horreeya ee iga yaabiyay waa intee in la ixtiraamo wax kasta oo la xiriira asalka, raadinta ku dhawaad ​​milimitir dhan muuqaalada iyo wada hadalada (halkan ayay ku celceliyaan Codadka Isbaanishka, qaarbaa si isku mid ah u ah, sida kuwa gargoyles, tusaale ahaan), iyo sidoo kale qayb wanaagsan oo ka mid ah qaabeynta labada weji ee ugu horeeya: Dani crypt iyo xabaalaha.
Sheekadiisu weli waa mid laga naxo in lagu bilaabo aaminaaddaas in Sir Daniel Fortesque, oo ahaa boqorka boqorka, uu u horseeday dacwadda ka dhanka ah sixirbararka Zarok iyo jinniyada, ilaa heer uu ku guuleysto dagaalka isla markaana la dilo. Sidaa daraadeed waxaa loo tixgeliyey inuu yahay geesi Gallowmere boqol sano, ilaa dib uga soo noqoshada saaxirkan shar leh. Runtu waxay tahay in Dani ahaa kii ugu horreeyay ee ay dhacaan, oo ay ku dhacdo fallaadho qaarkood. Waana waxa kaliya ee ay noogu soo xusuusiso qaylo dhaantiisa.
Hagaajinta heerka garaafka ayaa ah wax badan oo palpable ah iyo qaabeynta badhamada PS4 inbadan oo la mid ah heerka cayaaraha noocan ah, oo ka soo horjeedda wixii ku dhacay PSOne, buuq iyo jahawareer kadis ah oo kadis ah, oo xadidan. badhamada L2 iyo R2. Mararka qaarna ay ku dhacaan diyaarado go’an oo qaarkood dhibsanayeen. Halka kamaradda of hagaajin wali xoogaa kadis ah, wax badan ayaa kaantarooli kara.
MediEvil wali ma aysan soo bandhigin hubkeeda
Tan hagaajin ka MediEvil waxay si cad u cadaynaysaa in kontoroolkiisu uusan wali qotodheerayn, isagoo ficil ahaan u adeegsanaya badhanka ugu fiican. Oo aad u fudud. Waxaan sii wadnaa laba nooc oo weerar ah iyo suurtagalnimada tuurista hubka, laakiin uguyaar liiska agabyada ayaa ka badan oo wax ku ool ah.
Waxaa jira laba faahfaahin oo dareenkeyga qabsaday:
Hadda waxaan baabi’in karnaa dhagaxyada xabaalaha
Laakiin aagaggii aan ka adkaanay way tartami doonaan
Markii hore, dhagxaantaas lama burburin karin, iyada oo, ay la yaab tahay in kasta oo ay u muuqato in waqtigaa, jirku ay sii ahaadeen wakhti wanaagsan ilaa aan ka dhaqaaqnay oo ku filan. Dabcan, PS4 hadda waxaan ku heli karnaa kaydka halka Dani soo tooso oo hel koofiyad.
Dareenka, dhinaca kale, wuxuu ku sii dhaqmaa isla sidii kuwii 1998 asalka ahaa. Uma jeedno horumar sida ugu weyn oo la filan karo maxaa yeelay kamarad u baahan waxoogaa hagaajin si aan waalli loo waayin, laakiin ugu yaraan way ku dhacdaa sida muuqata u arag maxaa yeelay PSOne-ka nooca loo yaqaan ‘PSOne classic’ weligood si sax ah ugama aysan muuqan sawiradooda. Hadana hawshii buuxinta jaangooyooyinku waxay noqon doonaan kuwo si aad ah loo adkeysan karo.
Xaqiiqdi, Uma muuqato inaan wajahayno panacea Ciyaarta fiidiyoowga ee dib loo soo nooleeyay ka dib in ka badan 20 sano oo taariikhda ah, sidaa darteed wax walbaa waxay ku xirnaan doonaan ilaa iyo intee shaqadaasi ina calaamadisay. Xaaladdayda, waxaan door bidaa inaan sugo.
Soo saare: Kale oo ku dhex gala Badweynta
Shirkadda: Sony Interactive Entertainment
Furitanka: Oktoobar 25, 2019
Qiimo: 29.90 euro